Taariikh nololeedkii Cabdiraxman Tuur | Somali Wiki
Home / Siyaasiyiin / Taariikh nololeedkii Cabdiraxman Tuur
Posted by: somaliwi in Siyaasiyiin January 17, 2017	Comments Off on Taariikh nololeedkii Cabdiraxman Tuur 300 Views
Cabdiraxman Axmed Cali oo loo yaqaaney Cabdiraxman Tuur ahaana siyaasi weyn oo Soomaaliyeed, jagooyin badanna ka soo qabtey Soomaaliya iyo Somaliland ayaa bsihan November 8dii ku geeriyoodey magaalada London.
Allaha u naxariistee, Cabdiraxmaan Axmed Cali (Tuur) wuxuu ku dhashay miyiga hawdka magaalada Burco, qiyaastii sida dad yaqaannay ay BBC-da u sheegeen, kun sagaal boqol iyo dhawr iyo labaatankii.
Walaalkii Maxamuud Axmed Cali oo ahaa aabbihii waxbarashada Soomaaliyeed ayaa Cabdiraxmaan ka soo kaxeeyay miyiga oo ku daray dugsiga, iyagoo isku fasal noqday rag kale oo uu ugu magac dheeraa Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal.
Waqtigaasi wuxuu ku aaddanaa 1943kii ayuu Cabdiraxman ku biirey dugsiga caanka ah ee Sheekh. Wuxuu ahaa Cabdiraxmaan Axmed Cali arday ku fiicn waxbarashada iyo isboortigaba oo marnaba aan laga qaadi jirin kaalinta kowaad.
Cabdiraxmaan Axmed Cali alla ha u naxariistee markii uu dhammeystay waxbarashadiisii dugsiga dhexe ee Sheekh wuxuu waxbarashadii dugsiga sare ku soo dhammeystay dugsi sare oo la yidhaahdo XANTUUB oo ku yaalla dalka Sudan, magaalada Khartuum.
Wuxuu kadib diploma sare oo ah cilmiga maamulka ku soo qaatay jaamicadda la yidhaahdo EXETER UNIVERSITY ee dalka Britain. Somaliland ayuu Cabdiraxmaan ku soo laabtay wuxuuna noqday kaaliyaha DC-ga Boorama oo ahayd shaqadiisii ugu horreysay.
Sanooyinkii 1961-1963kii wuxuu noqdey Guddoomiyaha Gobolka woqooyi Bari ee magaalo madaxda ay u ahayd Burco ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. Sanadkii 1964kii wuxuu kaloo noqday Guddoomiyaha Gobolkii Woqooyi Galbeed ee Hargeysa ay magaalo madaxda u ahayd ee Jaamhuuriyadda Soomaaliya, iyadoo isla sannadkaasi uu noqday Safiirkii Soomaaliya ee Sudan oo loo beddelay Khartuum.
Sanadkii 1968kii Cabdiraxmaan Axmed Cali wuxuu ka qayb galay doorashadii baarlamaanka ee Soomaaliya isagoo furtay xisbi oo iska soo sharaxay magaalada Burco, laakiin kumuu soo bixin doorashadii.
Sanadkii 1978kii wuxuu kaloo noqday safiirkii Soomaaliya ee Barlin ee Jarmalkii Bari, isagoo markii danbena noqday Danjiraha Somaliya ee Imaaraadka Carabta oo uu joogay ilaa iyo 1984kii, xilligaasi oo uu ka goostay dawladdii Siyaad Bare kuna biiray Jabhaddii SNM.
Cabraxmaan Tuur isla sannadkaasi 1984kii wuxuu noqday wakiilka SNM ee Yurub oo fadhigiisuna ahaa London. April 1990kii waxaa loo doortay Cabdiraxmaan Axmed Cali Guddoomiyaha SNM isagoo xilka kala wareegay Axmed Siilaanyo.
May 1991kii waxaa Cabdiraxmaan Tuur loogu doortay shirweynihii beelaha Somaliland ee Burco ee lagaga dhawaaqay goonni isu taagga Somaliland inuu ahaado madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda loo bixiyay Somaliland muddo labo sano ah.
Shantii May 1993kii shirweynihii kale ee beelaha Somaliland ee lagu qabtay Boorama waxaa Cabdiraxmaan Tuur uu xilkii ku wareejiyay Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal oo shirku u doortay madaxweynaha Somaliland.
April 1994kii Cabdiraxmaan Axmed Cali wuxuu ku dhawaaqay isagoo markaa ahaa guddoomiyaha SNM inuu ka noqday mowqifkii goonni isutaagga Somaliland oo uu aaminsanyahay nidaamka Federaalka oo ay ku midoobaan woqooyiga iyo koonfurta Soomaaliya .
Waqtigaasi wixii ka danbeeyay wuxuu marxuumku u badnaa magaalooyinka Muqdisho iyo London, hase ahaatee wuxuu Hargeysa yimid bishii April ee sannadkan 2003, markaasoo uu u ololeeyay sidii uu u soo
bixi lahaa doorashadii socotay madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin oo ka sharaxnaa xisbiga UDUB, kadibna wuxuu ku laabtay magaalada London oo uu ku geeriyooday 8dii November 2003.
Alla ha u naxariistee maydka marxuumka waxaa la keenay Hargeysa 13ka November 2003 oo si heer qaran ah loogu aasay.
W.Q. Axmed Saciid Cige, BBC Somali
Previous: Taariikh nololeedka Sheekh Cumar-Faaruuq
Next: Hees ku habboon inay bartaan ardeyda Kulliyadda Dhaqaalaha (BEESHU WAA ISKU DAN, Abwaan M C Kaariye)